Izindlela zokuhlaziya ukusebenza kwe-SEO yakho neSemalt
IYINI INDLELA YOKWENZIWA KOMOYA i-SEO?
IMISEBENZI YOKWENZIWA KWE-SEO
UKWENZA IZIMANGALISO ZE-SEO NE-SEMALT
Nsuku zonke abanikazi abaningi bewebhusayithi, abaphathi bewebhu, abahlaziyi, kanye nezinhlangano zokuthengisa zedijithali zibonisa ukuthuthukisa amazinga noma amawebhusayithi abo noma amaklayenti emiphumeleni yokucinga yakwaGoogle.
Yonke imizamo yabo ihlanganisa ithemu eyodwa, i- SEO . Ukuhlonza nokusebenzisa izidingo ze-SEO kuzisiza ukuba zithuthukise isikhundla sewebhusayithi kumaSERPs (Amakhasi Wokusesha Injini).
Kunamathuluzi atholakalayo okuhlaziya ukusebenza kwe-SEO kwewebhusayithi, kepha ukuthola okulungile akukho lutho olungaphansi kokuwina uhhafu wempi yokulwa.
Le ndatshana ikunikeza ngokuqonda kokuhlaziywa kokusebenza kwe-SEO nokuthi ungumthombo othembekile, uSemalt, ongakusiza kanjani ukufeza izinhloso zakho ze-SEO.
Uma ungakwazi ukulinda ukuzuza kuthuluzi lokuhlaziya lewebhusayithi leSemalt, chofoza lapha futhi ujabulele. Ungaqhubeka nokufunda i-athikili futhi ufunde ngezindlela zokuhlaziya ukusebenza kwe-SEO noSemalt.
Kuyini Ukuhlaziywa Kokusebenza kwe-SEO?
Ukuhlaziywa kokusebenza kwe-SEO ukuhlolwa ngokucophelela kwesiza kumapharamitha ahlukahlukene ahlobene ne-SEO. Kubandakanya ukucwaninga iwebhusayithi nokuhlonzwa kwezidingo zokusetshenziswa kwesikhundla esiphezulu kumaSERPs.
Ukuhlaziywa kokusebenza kwe-SEO kukusiza ekutholeni ukuthi ngabe isu lakho le-SEO lisemkhondweni futhi yiziphi izingqinamba, ezithinta simo sesayithi lakho, udinga ukubhekana nalo.
Ukubaluleka kokuhlaziywa kokusebenza kwe-SEO
Imininingwane enikezwe ukuhlaziya kokusebenza kwe-SEO ekugcineni kukusiza ngokulandelayo:
Isiza ekwandiseni ukufinyelela kwakho.
Ishayela ithrafikhi ethe xaxa kuwebhusayithi yakho.
Kuyasiza izinga lewebhusayithi yakho liphezulu emiphumeleni yokucinga.
Kukuvumela ukuba ufinyelele izinhloso zakho zobuchwepheshe ngokushesha.
Ngokuhlaziya lokhu, wenza izinqumo ezicatshangwe kahle nezinamasu. Isikhathi nemali edingekayo ukwenza ngcono amazinga esayithi lakho nayo yehla kakhulu.
Uma kungekho ukuhlaziywa kwe-SEO okuphelele, ukwenza izinqumo ezinolwazi zokuthuthukisa izinga lesayithi emiphumeleni yokucinga ye-Google cishe akunakwenzeka.
Okubalulekile kokusebenza kwe-SEO
Ukuthuthuka kwakamuva kwama-algorithms we-Google kugxile kumasayithi avuzayo abonisa ukufana ngokuqukethwe, futhi hhayi nje ukusebenzisa amaqhinga obuchwepheshe ukukala phezulu.
Kunezisekelo eziningi ze-SEO eziwusizo ekuhlaziyeni nasekusebenziseni iwebhusayithi kahle. Ezinye ezibalulekile yilezi:
Ukukhishwa kwegama elingukhiye
Ukuxhumana Kwezindaba Zomphakathi
Ukushicilela Okuvame Kokuqukethwe
Masiqonde ngamunye wabo:
Yonke iwebhusayithi kufanele inikeze imininingwane yezobuchwepheshe kubakhwebuli bewebhu ukuze bakwazi ukuyiqonda, bayibone, futhi bayifaka ohlwini lwemiphumela yokucinga. Lobu bucwepheshe busebenza noma buvele nje, kuya ngezenzo zomnikazi wewebhusayithi.
Ubuchwepheshe obusebenzayo buhlanganisa izindlela ezithathiwe zokwazisa izinjini zokusesha ngoshintsho esizeni. Isibonelo sale ndlela ngukuxhuma iwebhusayithi yakho namathuluzi we-webmines wezinjini zokusesha ukusebenza kwawo kwe-SEO.
Ubuchwepheshe obudlulayo buhlanganisa izindlela ezithathiwe zokuhlinzeka ngezinjini zokusesha ulwazi oludingekayo lwamakhasi wesayithi aqondiswayo. Isibonelo sendlela yokunikeza ukuhlinzeka ifayela le-XML ukusesha izinjini ukuze baqonde kangcono ukuthi yikuphi okuqukethwe okudinga ukukhonjiswa.
Uma iwebhusayithi yakho ingenazo i-SEO, yonke imizamo oyibeka ekwakheni nasekukhiqizeni okuqukethwe okuthokozayo iyimfucuza njengoba izinjini zokucinga zihluleka ukukhomba isiza sakho.
Amagama angukhiye amagama noma imishwana abantu abayisebenzisayo ukusesha imikhiqizo, izinsizakalo, noma ulwazi ngezinjini zokucinga. Abashicileli bokuqukethwe kanye nabanikazi bewebhusayithi bakhomba amagama angukhiye asetshenziswa kakhulu ekusesheni imikhiqizo noma izinsizakalo zabo, bese, bakha okuqukethwe okufanele
Lapho uthola amagama angokhiye ehambelana kakhulu neminikelo yakho, kuba lula ukudala okuqukethwe ukuyisebenzisa. Ngenxa yalokhu, iwebhusayithi yakho izokhanga ithrafikhi eyengeziwe.
Qaphela ukuthi akufanele usebenzise ngokweqile, usebenzise kabi, noma usebenzise amagama angukhiye ngoba uma lokhu kwenzeka, izinjini zokusesha azichithi isikhathi esiningi ekujeziseni iwebhusayithi.
Amawebhusayithi axhumana ngamakhasi e-web, futhi la makhasi e-web kufanele agxile ekubekweni kokuqukethwe (alandele imihlahlandlela ethile ethile kanye nemithetho ephathelene nokuqukethwe) ukukhulisa ukufinyelela kanye nosesho lwewebhusayithi.
Ukufakwa amakhodi kufaka phakathi isakhiwo esifanele sekhasi lewebhu. Kufanele ichaze ukulandelana kokuqukethwe ekhasini lewebhu ukusesha izinjini. Qiniseka ukuthi isihloko sekhasi lewebhu, izihloko zalo kanye nezihlokwana (H1, H2, H3, H4), okucashile, nezinye izinto kubhalwe kumakhodi okusesha kalula.
Kufanele futhi usebenzise amagama angukhiye afanele futhi ugcine ubungako bawo ekhasini lakho lewebhu. Nakekela imihlahlandlela yokuxinana kwamagama asezingeni lamavidiyo nezithombe.
Namuhla, ama-backlinks abalulekile ngoba anethonya simo sekhasi lewebhu ezinjini zokucinga. Ama-backlink angamawebhusayithi axhumanisa emuva ekhasini lewebhu.
Ukuqonda umdlalo wama-backlinks kuyinkohliso ethize. Kunezinto ezimbili umuntu okudingeka aziqonde:
Zonke izingosi ezikhonjiswe ku-Google zinikezwa i-PageRank ngokususelwa kunani lamasayithi axhumeka kuwo.
Ama-backlink avela kuwebhusayithi eyodwa ene-PageRank ephezulu anesisindo esengeziwe uma kuqhathaniswa nama-backlinks asuka kumakhulu amasayithi ane-PageRank ephansi.
Uma ikhasi lakho lewebhu lithola ama-backlinks kuwebhusayithi ene-PageRank ephezulu, izinjini zokusesha ziqala ukubheka ikhasi lakho le-web njengesixhobo esibucayi, futhi ngenxa yalokho, sikubeke phezulu.
Amapulatifomu Ezokuxhumana asebenza kahle kakhulu uma kuziwa ekwabelaneni okuqukethwe. Ukwabelana nge-athikili noma ifayela le-media kuma-social media amapulatifomu afana ne-Facebook, Twitter, LinkedIn, nabanye kusho ukudala ama-backlinks aphezulu e-PageRank kuwebhusayithi.
Cishe konke okuqukethwe kwabelwa emithonjeni yezokuxhumana yinoma ngubani, abanye abantu bacabanga ukuthi ukwaba okuningi kuthuthukisa izinga lewebhusayithi. Hhayi, akulona iqiniso ngamaphesenti ayi-100.
Ezinjini zokusesha, ucezu lokuqukethwe lubalulekile uma lunamasheya amaningi ngokubandakanya okuphezulu. Kubandakanya inani lokuthandwa, ukubekwa kwamazwana, nama-tweets kabusha noma ukwaba kabusha.
Uma lokhu kwenzeka ngewebhusayithi yakho, izinjini zokucinga zizokwazi ukuthi okuqukethwe okukuyo kubalulekile futhi sekuqoqe ukubonga ngezenzo. Ngakho-ke, bazoyibeka phezulu ngokwemvelo.
Izinjini zokusesha, njenge-Google, amawebhusayithi amawebhusayithi hhayi kuphela ngenxa yokuhambisana kwezobuchwepheshe, amagama angukhiye, okuqukethwe, nokwabelana ngezindaba zenhlalo kepha futhi ngesipiliyoni sangempela sabasebenzisi abanokuqukethwe kwewebhu lewebhu.
Isipiliyoni somsebenzisi sifaka ukwakheka kwewebhusayithi nokubekwa kokuqukethwe kuyo. Ngaphezu kokunye okuyisisekelo, iGoogle ibheka ukufakwa kwezingcingo ezintweni zokwenza kwekhasi lewebhu.
I-Google iyakwazisa uma izinto ezinjengezikhangiso noma inkinobho yokubhalisela noma inkinobho yokuthenga zitholakala ngaphandle kokukrola ikhasi phansi. Yebo, kusiza isikhundla sewebhusayithi.
Akusho ukusebenzisa kabi lesi sigaba (ngaphezulu kwesibaya). Isibonelo, i-Google ijezisa lapho ithola ukuthi iwebhusayithi yakho inezikhangiso eziningi ngaphezulu kwesibaya.
Iwebhusayithi kufanele ibe nokuqukethwe okufanele kukhonjwe futhi kubalwe ezinjini zokusesha. Uma kunamakhasi wokuqukethwe amaningi kumawebhusayithi, izinjini zokusesha zinezixhumanisi eziningi zokubhekisela kuzo.
Yisizathu sokuthandwa nokuphumelela kwezindawo zezindaba. Bakushicilela njalo okuqukethwe okuningi, okuthi, kungakhuphi inani lamakhasi akhonjisiwe kuphela, kepha futhi nethrafikhi.
Kukhona futhi amabhulogi akhethekile athumela njalo izindatshana ezinamagama angukhiye afanayo nezindikimba. Lokhu kulungiselelwa kutshela iGoogle ukuthi la mabhulogi akhethekile anolwazi. Ngakho-ke, ibafaka phezulu.
Konke lokhu kusho ukuthi imvamisa yokushicilela okuqukethwe iyinto ebalulekile yokubalwa. Uma uthumela njalo okuqukethwe okusha, okulungiselelwe, nokuqukethwe kwiwebhusayithi yakho, izinjini zokusesha zizokubuka futhi zithuthukise izinga lazo.
Ukuhlaziya Ukusebenza kwe-SEO noSemalt
Ukunakekela zonke izinto ezibalulekile ze-SEO akulula kumuntu. Yingakho kunezinkampani zokuthengisa zedijithali, njengoSemalt, onochwepheshe bokuphatha izinto ezihlukile ze-SEO.
Ezinkampanini ezinjengeSemalt, abanye ochwepheshe baphatha i- curation yokuqukethwe, abanye baphatha ubuchwepheshe, abanye bagxila kuma-backlinks, futhi iyaqhubeka kanjena. Imizamo ehlanganisiwe yalaba ochwepheshe iholela ekwenzeni ngcono ukusebenza kwe-SEO kwewebhusayithi.
USemalt unikeza insiza ye- web analytics elandelayo:
Iqapha imakethe yakho
Landela kanye nezikhundla zomqhudelana wakho
Ithola imininingwane ephelele mayelana nebhizinisi lakho
I-Semalt isiza ngawo wonke ama-KPI (Izinkomba Zokusebenza Abalulekile) kwimpumelelo ye-SEO. Ezinye zazo yilezi:
Iziphakamiso zegama elingukhiye
Ukuhlaziywa kwewebhusayithi okuphelele
Ithrafikhi yokusesha ye-organic
Ukuzibandakanya kwabezindaba kwezenhlalo
Isebenza Kanjani Iwebhusayithi Analytics?
Okokuqala, udinga ukubhalisa noSemalt futhi uqalise inqubo ukuthola idatha yokuhlaziya. Lapho inqubo igcwalisa, uzothola umbiko onemininingwane equkethe:
isikhundla sewebhusayithi yakho
imigqa yabancintisana bakho
Ukuhlolwa kwewebhusayithi yakho maqondana namazinga embonini yokwakhiwa kwewebhusayithi kanye ne-SEO
Ungaguqula lo mbiko onemininingwane ukuthi ube yi-CSV kanye namafomethi we-PDF bese uwukhipha kwikhompyutha yakho. USemalt futhi uvumela ukuthumela i-imeyili ngalo mbiko wokuhlaziya.
Ukuqala ngokuhlaziywa kwewebhusayithi kulula futhi mahhala. Udinga nje ukufaka isizinda sendawo, futhi kungakapheli umzuzu noma emibili, uzofunda ngezinto ezivimba iwebhusayithi yakho kwisikhundla esiphakeme emiphumeleni yokucinga.
Ukuze ungeze isayithi lakho ku-'PR hlaziya 'mahhala, ungachofoza lapha bese upheqela phansi. Uma uyithola, vele ufake igama lewebhusayithi yakho bese uchofoza inkinobho ethi 'Qala Manje'.
Ukuhlaziya ukusebenza kwe-SEO kubalulekile ekuthuthukiseni izinga lewebhusayithi kwizinjini zokucinga. Kukusiza ekuboneni izinto ezinesibambiso sokubhala phansi iwebhusayithi yakho.
Ukuhlaziywa kuyisinyathelo sokuqala sokuthuthukisa ukusebenza kwe-SEO yesayithi. Ukwazisa ngezinto ezidinga ukwenziwa ngcono, ngakho-ke sebenza kuzo.
Kodwa-ke, indlela enhle kunazo zonke ukuqasha izinsizakalo zesikhungo sokuthengisa esidijithali , njengeSemalt. NgoSemalt, ungakhululeka embhedeni wakho futhi ubuke iwebhusayithi yakho ithandwa kakhulu.